Inter Oo Guushii Ugu Horeysey Ku Gaartay Garoonkeeda San Siro Xilli Ciyaareedkan.
Kooxda Inter oo inkaar ka haysatay inay garoonkeeda ku badiso tan iyo markii la bilaabay xilli ciyaareedkan ayaa Fiorentina ugaga badisey 2-1 iyadoo Fiorentina ay ku ciyaaraysay intii badnayd ciyaarta 10 ciyaaryahan.
Inter oo ay dhowr ciyaaryahan oo muhiim ah ay dhaawacyo ka qabeen ayaa hase ahaatee waxa ay muujisey Inter inay weli nooshahay oo ay ku badin karto San Siro.
Saddexda goo lee garoonka ka dhashay ayaa ahaa kuwo la iska dhaliyey qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana ciyaarta goolka ugu horeysa dhaliyey Milito kaasoo ahaa rigoore loo dhigey daqiiqadii 17aad ee ciyaarta. Hase yeeshee isla qeybtii hore ee ciyaarta ayaa Cassano waxa uu dhaliyey goolkii labaad isagoo ka dhigey 2-0.
Kooxda Fiorentina inkastoo ay toban ciyaaryahan ku ciyaaraysay hadana dadaal badan ayay samaysay waxaana daqiiqadii 40aad goolka kaliya ee ay dhalisey u saxiixay Romulo.
kooxda Inter oo raadinaysay guul ayaa waxaa difaacooda uu ahaa mid saddex ka kooban taasoo si wanaagsan ay ugu shaqeysey tababare Stramaccioni kulankii uu la ciyaaray Chievo, waxana uu ku ciyaaray qaab ciyaareedka 3-5-2.
Philippe Coutinho ayaa ka faa’ideystey maqnaanshaha kubbad sameeyaha Sneijder oo dhaawac u maqnaa.
Kooxda Fiorentina oo aan nasiib u lahayn inay ku badiso San Siro ayaa waxa ay u ahayd guuldaradii 11aad ee isku xigta oo ay kala kulanto Meazza iyadoo lix gool dhalisey xambaarsatayna 23 gool.
Kulamadii kale ee horyaalka Talyaaniga ee la ciyaaraya ayaa waxa ay natiijooyinkoodu noqdeen sidan:
Demba Ba Oo Ku Tilmaamay Nasiibdarro Kubbad Uu Gacanta Ku Dhaliyey Kulankii Reading
Weeraryahanka Newcastle Demba Ba ayaa beeniyey in uu si ulakac ah uu gacanta ugu dhaliyey goolkii barbaraha ahaa ee ay kooxdiisu shalay dhibicda ka heshay kulankii Reading.
Ba ayaa labo gool dhaliye qeybtii dambe ee ciyaarta garoonka Madejski iyadoo kooxda Reading ay labada qeyb ee ciyaarta ay goolasha u kala dhaliyeen Jimmy Kebe iyo Noel Hunt.
Ba ayaa goolkiisii hore waxa uu ahaa mid uu kubbada dul mariyey goolhayaha hase yeeshee goolkiisii labaad ayaa ahaa mid si weyn ay wargeysyada uga hadleen kadib markii uu kubbad soo dhaaftay Shane Ferguson uu gacanta shabaqa ku cusjiyey.
Waxa ay u muuqatay in uusan si ulakac ah gacanta u isticmaalin waxana uu weeraryahanka reer Senegal u sheegay Sky Sports ciyaarta kadib
“ Fergie ayay kubbadu ka soo gudubtay waxana aan doonayay oo kaliya in aan madaxa ku dhufto.
“Nasiib darro,gacanta ayay iiga dhacday gudahana waa u gashay shabaqa kubbada.
“Waxaan dhihi lahaa waxay u ahayd nasiibdaro Reading balse annaga dhibic ayay noo ahayd.”
Ba ayaa waxa uu intaasi sii raaciyey: “Waxa aan dhici karo? Ma dooneyn inaan gacanta ku taabto balse waxa ay ahayd nasiibdarro.”
Luis Suarez Oo Argagixiyay Mar Kale Norwich, Isagoo Albaabka U Furay Xilli Ciyaareedka Liverpool.
Luis Suarez ayaa dib u soo xusuusiyay dad badan wixii dhacay Aprill 28keedii ee isla sannadkan markaasoo uu Carrow Road uu sidii shalayto oo kale ku dhaliyay seddexleey, islamarkaana guul niyadsan ah ku hogaamiyay Liverpool.
Reds ayaa shalayto gaartay guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, waxaana ay ku ciilbaxeen Norwich City oo ay ku dardareen 5-2, iyadoo xiddigooda Suarez uu ahaa ciyaaryahankii guusha ku hogaamiyay.
Suarez ayaa sidoo kale caawiye ka ahaa goolkii Sahin, waxaana uu sidoo kale kubad qatar ah madaxa u saaray Gerrard inkastoo kabtanka England iyo Reds uu qasaariyay fursadaas. Waxaa sidoo kale laga diiday kubad u muuqatay rigoore.
“Qaabka dhameystirkiisa waa mid aan caadi aheyn, marka laga reebo marka uu waji ka waji u wajahayo goolhayaha” ayuu Rodgers yiri isagoo dhoolacadeynaya ciyaarta ka dib.
Rodgers ayaa ku celiyay mar kale in Suarez uusan aheyn qiyaanoole islamarkaana uu yahay geesi, isagoo mar kale ku dooday in kooxdiisa laga beeniyay rigoore sax ah, madaama garsoorayaasha ay aamineen in Suarez uu qiyaanoole yahay.
Liverpool waxa ay haatan ku jirtaa kaalinta 14aad iyagoo leh shan dhibcood, lix kulan oo ay ciyaareen.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka Serie A Ee Inter Milan v Fiorentina.
Kulanka: Inter Milan v Fiorentina
Waqtiga: 9:45 p.m xilliga Soomaaliya.
LINE-UPKA MACQUULKA AH:FC INTERNAZIONALE
Juan,� Ranocchia, Samuel
Roncaglia, Tomovic, Rodriguez�
Inter ayaa isha ku heysa inay sii wado guusheedii ay habeenki arbacada ka gaartay kooxda Chievo, iyagoo raadinaya guushoodii ugu horeysay ee San Siro ee xilli ciyaareedkan. Ka dib guuldaradoodii lama filaanka aheyd ee ka soo gaartay Siena, tababare Andrea Stramaccioni ayaa isbedel ku sameeyay qaab ciyaareedka kooxdiisa, isagoo doortay inuu ku soo shirtago daafac seddex ah.
Stramaccioni ayay u badan tahay inuusan isbedel weyn ku sameyn doonin line-upkiisa, inkastoo maqnaanshaha Wesley Sneijder ay muran la’aan tahay dhabarjab weyn, hadana waxa ay heystaan Antonio Cassano oo bedel isagoo ku soo galay gool ka dhaliyay kooxda Chievo ee lagu naaneeso dameerada duula, waxaana uu afka hore kala ciyaari doonaa Diego Milito.
McDonald Mariga, Dejan Stankovic iyo Rodrigo Palacio ayaa dhamaantood dhaawac ku maqan, inkastoo Christian Chivu uu taam yahay mar kale.
Ka dib kulan ay qaab ciyaareed weyn soo bandhigeen ee Juventus, Viola ayaa raadineysa inay dhibaato ku noqoto koox kale oo weyn oo Serie A ah. Kooxda Vincenzo Montella ayaa qaab ciyaareed wacan soo bandhigtay kulankii ay la ciyaareen Juventus iyagoo barbaro ku kala baxay.
Ka dib qaab ciyaareedkaas Montella ayaan wax isbedel ah ku sameyn doonin line-upkiisa, inkastoo dhaawac ay kaga maqan yihiin Alberto Aquilani iyo Mounir El Hamdaoui.
Kulankii San Siro ka dhacay xilli ciyaareedkii hore ee labadan kooxood Inter ayaa ku badisay 2-0.
Antonio Cassano ayaa ah ciyaaryahan ugu goolasha badan Inter isagoo dhaliyay seddex gool shan kulan uu saftay. Iyadoo labo kulan oo ka mid ah uu ka soo kacay kursiga keydka.
Inter waxaa la aasaasay 1908, waxaana ay horyaalkoodii ugu horeysay ku guuleysteen labo sanno ka dib.
Fiorentina ayaa haatan ku jirta kaalinta 6aad ee Serie A, iyadoo kaliya hal kulan laga badiyay xilli ciyaareedkan.
26ka ciyaaryahan ee kooxda waa weyn ee Fiorentina, 17 ka mid ah waxa ay kooxda ku soo biireen xagaagii.
Fiorentina ayaa ku guuleysatay labo jeer horyaalka Serie A, koobkoodii ugu danbeeyay waxa uu ahaa 1968-69.
Ferguson Oo Ku Cataabay In Waqti Ku Filan Aan Lagu Darin Ciyaartii Guuldarrada Ay Ka Soo Gaartay Spurs.
Tababaraha kooxda Manchester Unites Sir Alex Ferguson ayaa ku cataabay in waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaartii kooxdiisa ay guuldarada ka soo gaartay Tottenham xalayto inuu ahaa mid aad uga yar waqtigii saxda ahaa ee lagu dari lahaa.
Man United ayaa guuldarro 3-2 ay ka soo gaartay Tottenham, oo muddo 23 sanno ka dib ku badisay Old Trafford ciyaaraha Premier League.
Sir Alex ayaana aaminsan in waqti ku filan oo dheeri ah inaan ciyaarta lagu darin.
“Waxa ay aheyd guuldarro laga xumaado sababtoo ah rikoorka aan heysanay waxa uu ahaa mid fantastik ah.” ayuu yiri SAF ciyaarta ka dib.
“Waxa ay ciyaarta ku dareen afar daqiiqo, aflagaado ayayna ku tahay ciyaarta. Waxa ay ka beenineysaa fursad fiican oo aad ku badin laheyd ciyaarta.
“Waxaa jiray lix bedel oo la sameeyay intaas ayaaba afar daqiiqo ay ku dhuntay, goolhayaha waxa uu waqtiga qasaariyay labo ilaa iyo seddex daqiiqo, mar walba waqtigooda ayay qaadanayeen marka ay kubad soo tuurayaan. Qof walba waa ay u cadeyd taas.
“Dib u socod ayayna ciyaarta ku tahay in garsooraha uu mas’uul ka noqdo ilaalinta waqtiga. Waa wax doqonimo ah in iyadoo la marayo 2012 in garsooraha uu weli koontaroolayo waqtiga.”
Tababaraha Spurs Andre Villas-Boas ayaan isaga aysan ka soo yeerin wax cabasho ah, waxaana uu ku qanacsanaa rikoorka uu ka jabiyay United, kaasoo soo bilowday isagoo 11 jir ah 1989kii.
“Waxaan u qornay kooxdeena taariikh. Maqsuudkana halkaas ayuu ka imaanayaa” ayuu yiri.
Fabregas Oo Ka Badbaadiyey Guuldarro Barcelona Kadib Markii Ay 3-2 Si Dirqi Ah Ugaga Badiyeen Sevilla
Barcelona ayaa dagaal u gashay sidii ay guul uga keeni lahayd Sevilla iyadoo labo gool loogaga hormaray ayna heshay guushii ay rajaynaysay daqiiqadihii lagu daray ciyaarta markii uu David Villa u dhaliyey goolkii guusha kaasoo ka dhigey lix kulan oo ay ciyaareen La Ligaha ay lixdoodaba badiyaan.
Sevilla ayaa waxa ay soo saftay kooxdeedii ka badisey Real Madrid waxayna hogaanka ciyaarta qabteen qeybtii hore markii ay socotay 26 daqiiqo waxaana goolka koowaad u dhaliyey Piotr Trochowski kadib markii uu meel cidlo ah ka helay kubbada.
Ciyaarta oo dhinaca jirka la isku isticmaalayay ayaa kooxda Barca dhowr jeer ku qeyliyeen garsooraha hase yeeshee qeybtii hore ayaa ku dhamaatay 1-0 oo ay ku hogaaminaysay Sevilla.
Dhowr daqiiqo markii ay socotay ciyaarta ayaa kubbad loo dhigey Messi waxaa dhexda ka qabsaday Mede loo isna u tuuray Negredo kaasoo dhaliyey goolkii labaad ee Sevilla kana dhigey 2-0.
Hase yeeshee dadaal badan oo ay sameeyeen Barcelona ayaa u suurtogashay in uu Fabregas uu gool u dhaliyo. Markaa kadib ayay rajadii Barca soo noqotay waxaana uu tababare Vilanova uu sameeyey saddex bedel isagoo soo geliyey David Villa,Tello iyo Thiago.
Fabregas oo ahaa xiddigii ciyaarta ayaa goolkii barbaraha dhaliyey daqiiqadii 89aad inkastoo dood badan ay ka keeneen kooxda Sevilla kadib markii gacanta lagu taabtay kubbada inta uusan dhalin Fabregas.
Kooxda Sevilla ayaa waxaa sii quusiyay daqiiqadii 90aad David Villa oo kubbad ay isku taabsadeen Messi shabaqa soo taabsiiyey.